မတ်မတ် Yoona ရဲ့ အဆူခံလိုက်ရတဲ့ မောင်လေး Park Bo Gum 😂 – Trend.com.mm
မင်းသားချော Park Bo Gum တစ်ယောက်ကဖြင့် မရိုးတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ 😛 မကြာသေးခင်က ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ Hyori’s Bed & Breakfast အစီအစဉ်မှာ Bo Gum တစ်ယောက် Yoona ရဲ့ အဆူခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။Girl’s Generation အဖွဲ့ဝင် အဆိုတော်မင်းသမီးချော လေး Yoona ကသူမပြောတာကိုနားမထောင်လို့ဆိုပြီး Bo Gum ကိုဆူခဲ့တာပါ။ မတ်မတ်အနားကမခွာဘူးတို့ ဘာတို့ 😂
Hyori’s Bed & Breakfast အစီအစဉ်က ရသစုံရှိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့ Hyori ကနေသိပ်မကောင်းလို့ အိပ်ရာထဲမှာအနားယူနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာ သူမကိုကူညီပေးသူတွေအဖြစ် Yoona နဲ့ Park Bo Gum တို့ကပါဝင်ထားပါတယ်။Hyori နေမကောင်းတော့ Yoona ကပဲနံနက်စာအတွက်ပြင်ဆင်ပြီး Bo Gum က ဘေးနားကနေ အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အမှိုက်တွေပစ်တယ်၊ကြမ်းပြင်တွေသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့အပြင်ကြောင်လေးနေတဲ့အိမ်သေးသေးလေး ကိုပါ သန့်ရှင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ ရိုက်ကူးမှုအပိုင်းပြီး သွားပြီဖြစ်လို့Yoona ကသူ့ကိုအိမ်ပြန်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့သူအတော်လေးပင်ပန်းသွားပြီဖြစ်လို့ အိမ်မြန်မြန်ပြန်ပြီးအနားယူတော့လို့ပြောခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ Bo Gum ကနားမထောင်ပဲ မပင်ပန်းပါဘူး။အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီး မောင်ကြိုးစားလေးက Yoona ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကိုငြင်းပြီး ဒုတိယထပ်ကိုတောင်တက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေးတွေဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာတော့ Yoona က သူမပြောတာကိုနားမထောင်ရ ကောင်းလားဆိုပြီးပေါက်ကွဲပါတော့တယ် 😂 ပြီးတော့ “Hey Park Bo Gum! GO HOME!” ဆိုပြီး အော်ပြောမှ နောက်ဆုံးသူမရဲ့ စကားကို နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြောစကားနားမထောင်တဲ့မောင်လေး 😅 ဒါတောင် မပြန်သေးပဲ ဧည့်သည်တွေနဲ့ Group photo ရိုက်နေပါသေးတယ်။ဘယ်လိုတောင်လဲနော် 😍ပရိသတ်တွေအတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မငျးသားခြော Park Bo Gum တဈယောကျကဖွငျ့ မရိုးတော့ဘူးထငျပါရဲ့ 😛 မကွာသေးခငျက ထုတျလှငျ့ပွသခဲ့တဲ့ Hyori’s Bed & Breakfast အစီအစဉျမှာ Bo Gum တဈယောကျ Yoona ရဲ့ အဆူခံလိုကျရတယျလို့သိရပါတယျ။Girl’s Generation အဖှဲ့ဝငျ အဆိုတျောမငျးသမီးခြော လေး Yoona ကသူမပွောတာကိုနားမထောငျလို့ဆိုပွီး Bo Gum ကိုဆူခဲ့တာပါ။ မတျမတျအနားကမခှာဘူးတို့ ဘာတို့ 😂
Hyori’s Bed & Breakfast အစီအစဉျက ရသစုံရှိုးအစီအစဉျဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့အပိုငျးမှာတော့ Hyori ကနသေိပျမကောငျးလို့ အိပျရာထဲမှာအနားယူနခေဲ့ပါတယျ။ဒီအစီအစဉျမှာ သူမကိုကူညီပေးသူတှအေဖွဈ Yoona နဲ့ Park Bo Gum တို့ကပါဝငျထားပါတယျ။Hyori နမေကောငျးတော့ Yoona ကပဲနံနကျစာအတှကျပွငျဆငျပွီး Bo Gum က ဘေးနားကနေ အိမျမှုကိစ်စတှကေိုကူညီပေးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
အမှိုကျတှပေဈတယျ၊ကွမျးပွငျတှသေနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးတဲ့အပွငျကွောငျလေးနတေဲ့အိမျသေးသေးလေး ကိုပါ သနျ့ရှငျးပေးခဲ့ပါသေးတယျတဲ့။ အဲ့ဒီနောကျသူ့ရဲ့ ရိုကျကူးမှုအပိုငျးပွီး သှားပွီဖွဈလို့Yoona ကသူ့ကိုအိမျပွနျဖို့ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဒီနသေူ့အတျောလေးပငျပနျးသှားပွီဖွဈလို့ အိမျမွနျမွနျပွနျပွီးအနားယူတော့လို့ပွောခဲ့တာပါ။
ဒါပမေဲ့ Bo Gum ကနားမထောငျပဲ မပငျပနျးပါဘူး။အဆငျပွတေယျဆိုပွီး မောငျကွိုးစားလေးက Yoona ရဲ့ တောငျးဆိုခကျြကိုငွငျးပွီး ဒုတိယထပျကိုတောငျတကျသှားခဲ့ပါသေးတယျ။ ပွီးတော့ သနျ့ရှငျးရေးတှဆေကျလုပျနခေဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီမှာတော့ Yoona က သူမပွောတာကိုနားမထောငျရ ကောငျးလားဆိုပွီးပေါကျကှဲပါတော့တယျ 😂 ပွီးတော့ “Hey Park Bo Gum! GO HOME!” ဆိုပွီး အျောပွောမှ နောကျဆုံးသူမရဲ့ စကားကို နားထောငျခဲ့ပါတယျ။ပွောစကားနားမထောငျတဲ့မောငျလေး 😅 ဒါတောငျ မပွနျသေးပဲ ဧညျ့သညျတှနေဲ့ Group photo ရိုကျနပေါသေးတယျ။ဘယျလိုတောငျလဲနျော 😍ပရိသတျတှအေတှကျသူတို့နှဈယောကျရဲ့ ပုံလေးတှကေို ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
မထင်မှတ်ထားတဲ့ Talent လေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေး Kim Yoo Jung